musha >Products >Lattice Fence
Nzvimbo yakagadzirwa nechetheni inogona kunge yakagadzirwa kubva pvc kana vinyl nyuchi dzinosanganisira slats dzakarongeka mumusara wakanyanya kudarika kana dhamondi pane nzvimbo dziri pakati. ichange iine wont yekuvhara nzvimbo yakakwana yeimba, semasvingo masvingo, matanda zvidzidzo, pevhavha yevhara, archway, mbambo yakakomberedza kana separadzana yakasiyana. zvinowanzoenderana nekutengeserana sezvinongoita chigadzirwa chekushongedza kwemasango kana se trellis kuminda iyo pose pairi mizambiringa nemiti yakasiyana-siyana inogona kukwira mairi sezvavanenge vachikura.
Nzvimbo yakagadzirwa nechetheni inogona kunge yakashongedzwa zvakanaka chaizvo uye inobatsira yekuti vazhinji vafunge vanoda. iwe unenge uchitaura zvakanyanya mumutambo wechechi, zvisinei iwe unodawo kuziva chii icho chidimbu chetambo? Rimwe jira rakagadzirirwa dzimwe nguva rinorondedzerwa sefense iri rine zvipembenene zvevinyl rakayambuka uye rakagadzirwa pamwe ne sq. Kana dhamondi yakaumba nzvimbo dzakasara pakati. rudzi urwu rwefence inongova tsika yekare uye isingachinji. Pane zvakawanda zvakasarudzwa zvisarudzo munzira yekuita uye kuvaka jira.
Mazhenje ekudzidzira ose akaumbwa nenzira imwechete. pasinei nokuti unoda sv. sq. maumbirwo kana ma diamondi maumbirwo, iwe uchangoti flip panhivi yepamusoro kana kutenderera uye iwe uine!
Nenguva yechechi, sei usingashandisi tayiti fence panels kuti ubatsire mbeu dzako dzinokura, uchiita sendima yakanaka kwazvo yemunda. Trellis fence panels zvakare inogadzirwa nefekitari kubva pakamanikidzwa inoputirwa matanda, hapana chainofanira kuvadzorera zvakare, nekukuchengetedza nguva nemari.
The Hidden Agenda Of Automatic Gate Fence
Nei Vinyl Fence Yakanga Yakanyanya Kuonekwa Kusvikira Iye Zvino?
Chikonzero nei tichida Kuda Vinyl Fencing Uye iwe unofanira Too
5 maropafadzo eVinyl Fence Installation
Mitsva miviri yePvc Gate reDheni uye Maitiro Aungaita Kushandisa Kwazvo.
The Reason Why Everyone Loves Gate Fence Style For Homes.
vinyl lattice fence panels / it's a private lattice fence
vinyl lattice privacy fence / yakanaka uye kupa fence yekuvanda
Pasinei nokuti unoda hutapfigiro-tambo dzefence panel or full trellis fence. Inofanirwa kutsigira vanosimudza, idzi garden trellis panels dzinobudisa nzvimbo yakanaka yeguti rako uye inovaka zvakanaka makanhi emapindu.
Tine fence yako yose inopa, sefence post uye mabharisheni, pane zvakakosha zvinokosha zvakare.
Lattice fence panels dzakanaka pakugadzira-the-cuff zvisinei iwe unobata munda wemuganhu kana kuparadzanisa nzvimbo dzakasiyana dzebindu rako. iyo yakakosha yekutsigira mbeu dzako dzinofadza dzinowedzera.
Yakagadzirwa kubva kumusoro kwepamusoro kushandiswa kwakaitwa matanda, idzi fence panels dzinosanganisira makore ane gumi namashanu chivimbiso kurwisa. iwe haufaniri kutorazve zvakare, uchikuchengetedza nguva uye mari.
Nzvimbo dzedu dzepajeri dzakavhara fani dzakanakisa kusvika kune dzimwe nzira dzasati dzaenda kune rusvingo rwekare.
Lattice Fence Front Garden
Kana uri kuedza kuwana chikoro, chinonakidza, uye chine chikonzero chakananga chekuvhara, tambo yekudzivirira ndiyo yakanakisisa kubheji. Nzira yekudzivirira inowanzowanzoonekwa muminda uye mapadhio, zvisinei iyo inowanzoshandiswa chero chero nzvimbo.
Nzira yekudzivirira inogona kunge inowanzoita fence, uye yakasiyana-siyana inoshandiswa. iwe uchakwanisa kushandisa lattice fence mune zvakasiyana-siyana zve nzira dzakasiyana-siyana umo, kuverenga pane zvaunoda uye imba.
Imwe nzira inobatsira iyo inobatanidza mazhenje ekudzivirira mashizha eminda, ndiyo iyo nyore mukati mazvo michero ichakwira nayo. Matawindo akawanda ematare anova mazhinji mumasvingo akakombwa muminda yemizambiringa. Mushonga wemasumbu wakakonzerwa netambo inoshanda zvakanaka kuti uwedzere mubhedha wemaruva kana gindu rekicheni.
Lattice ndiyo inowanzoshandiswa sevanoparadzaniswa, mabheji, uye masvingo mumayadhi. iyi inogona kuva nzira inokurudzira yekuidana iyo INE imba yakasununguka, kana kuti kuita kutenderera uye kufamba kune wako kunze kwemasuo.
mutengo - Lattice fence inogona kunge inogona kuve yakanzwisisika yakaenzaniswa nedzimwe mhando dzematareji. mamwe mhando dzefriji ichakoshesa kusvika kuviri chiyero chakanaka sekwakananga lattice fence.
Kusiyanisa - Pane kushandiswa kusingaverengeki kwechinguva chiduku chetetet lattice. Kubva kubva mumvura yakakwirira yebindu masvingo kusvikira kune nhanho nhanhatu dzemativi akavhara, jira rinokodzera chero chero nzvimbo. Uye kana iwe ukaisa mufense yako, pane nhamba yakawanda yemaoko inouya iyo inogona kushandisa yakasara yakasara.
Dyara ushamwari - Ganda rechetheni ndiyo mikana yakawanda yekusimudza michero uye minda. iyi inogona kunge ichiita kuti lattice fence ingange iri yakakodzera vanodikanwa nevarimi vemiti uye vanhu vanoda kuedza kutarisa zvakasimba.
Ease - Lattice fence iri nyore kuisa uye kushanda nayo. Nepo zvisarudzo zvakasiyana-siyana zvefosheni zvinowanzoshanda uye nguva yakawanda, mazamu anowanzomira nzira yekugadzirira uye isina kuipa.
Kudzokorora - Lattice fence inofadza chaizvo. Nokuda kwechikonzero ichocho inonyanya kukosha kune mapuranga uye mberi kwedivi. kuisa firiji yechipfu mukati mukati meimba yako ndiyo chikonzero chakanaka chekuwedzera kukanganisa kwako.
Complementary - Lattice inotamba zvakanaka nevamwe. Kune zvikamu zvishomanana zvakagadzirirwa izvo zvichatsanisana necheni yakashandiswa zvakanaka kana rusvingo. Matawero aripo anowanzosimudzirwa uye anowedzera kune ane lattice cheni.
Mazhenje epamusoro anowanzowanika mumagadzirirwo akasiyana-siyana zvakananga pamuchinjikwa wekriss, sq. Hatch, spindle, horizontal uye yeve style. Muchengetedzwa wekrisscross ndeyekuti inowanzoonekwa yakawanda inoratidzirwa nemasikirini echeka yakarongeka mune imwe nzira yakanyanyisa diagonal kana diamond. Iko sq. Hatch, kune rumwe rutivi rwakatarisana, imwe yekare uye ine sq. Nzvimbo yakazaruka mukati me slats. Imwe mhando ndeyokuti chidimbu chekutsvaira chinonzi "spindles" kana kuti slats yakadzika muHITI yakarurama, asi nzvimbo yakakoshevedza ine mavhiri ayo akavhara gadzika Mucheka wechipfuva unoshandisa nzira yakakura inoita kuti igare yakagamuchirwa se trellis yekukwira mizambiringa nemaruva muminda uye gazebos.
Nzira dzekudzivirira dzinogona kuve dzakarongedzwa kana kusinganzwisisiki, zvakare chigadziko chakazara kana chechipiri kune AN iripo fence. dzimwe nzira dzokusarudza maitiro dzinobata zvakananga, dzakashata kana dzakasungwa. Kukura kwaro kunogona kusiyanisa chero nzvimbo kubva pamamita matatu kusvikira mamita masere pakureba uye mamita mana kumakumbo akafara, asi kuparadzaniswa pakati peSlats kuchaenda chero kupi zvako kubva pamamita makumi maviri kusvika makumi masere masere mamita, uye inowanzosvika pamamilimita makumi mana. Zvinopedza zvinowanzovimba nemhando yezvishongo zvinoshandiswa asi izvo zvinowanzopwa, zvakasvibiswa, zvisina kupera (nekuda kwehuni) kana pfuti yakaputirwa (yesimbi).
A lattice fence inopa uhwuga, kuchengeteka uye kuita kuti kuvharidzira kwako kuwedzere kuwedzera kudiwa kumhuri neshamwari. uchiedza kuwana nzira yekukomberedza yard yako asi iwe uzvidzivirire manzwiro ekudzivirira marefu akavharwa? pane chimwe chinoda kuchengeteka pakati pezvivako zvako asi unonzwa kuti kuvhara masvingo akajeka ari pachena kune nzvimbo yako? Zvadaro mazhenje echetheni ndeyewo feni yakakodzera yakaonekwa iwe.
Mazhenje ematare anopa zvakakosha zvepasi rose - zvinoita uye aesthetics. Vamwe vanasaimba vangave vasingafariri micheka yakawanda semugumisiro wekuti havaiti zvakawanda zvehupombwe nekuda kwekukwirira kwavo kwenguva refu, asi masvingo akareba mamita matanhatu emakumbo anopa ruzivo rwekuwedzerwa zvakasungwa kwekuvharirwa semugumisiro wekuti vakakwirira zvikuru uye yakavharwa. kunyange zvakadaro magetsi echetheni ndiwo akasiyana zvakasiyana-siyana apo anopa munda unobatanidzwa wakavharirwa neimba yako.
A lattice fence inofadza fence yekushandisa sezvo iri fambo inoratidzika yakanakira. Iro fambo inogona kunge yakagadzirisa kukonzera kunze kunze uye kuchengetedza nzvimbo inotaurwa pane imwe nguva. Kuuya nechetheni yechenzi haisi nyaya inonetsa kuti uedze uye iwe unogona kuita rudo iwe pachako. Zvechokwadi, iwe unoda pfungwa kana iwe uchida kutarisa firati yejeri. iwe uchawana pfungwa dzinodiwa kutarisa firati yechipfumi kubva, semuenzaniso, mazhenje emakwenzi akaumbwa nevamwe. Pano pane mahombekombe akawanda ehope iwe uchawana pfungwa kubva iwe uchifunga nezvekuuya nechetambo yejeri kune nzvimbo yako yekunze.
Zvichida lattice flat-top fence miitiro yakajairika, zvisinei kuti haafaniri kutarisa iyo nzira. Iyi nheyo yepamusoro yakagara ichinzi muvakidzani wakanaka-sezvo vavakidzani vangave vachitaura kuburikidza nechitsiko chepamusoro.
Ko yakawanda sei fence yakadhura?
Mazhenje echechi ndeyvesarudzo yekubatira fence sarudzo sezvo dzimwe nguva inodhura kaviri kudarika kushandiswa kwekudzivirira masvingo. dzimwe nguva inodhura kubhadhara zvinoreva zvekukomberedza $ 8 kusvika $ 60 pamakumbo mana, zvichienzaniswa ne $ 100 pamusana pekuvhaka kwetsoka kwepakati dzemataundi akaoma. Chimiro chakagadzirwa nejairo panels hachikwanisi kukosha nguva dzose semugumisiro waro zvichienderana nemhando yemujekiti. zvimwe zvigaro zvingawedzera kuwedzera kana gedhi kana kupinda kune imwe nzvimbo yako lattice fence.
Low finish wood lattice fences dzimwe nguva inodhura $ 2 kusvika ku $ 5 nemakumbo mana asi mazhenje ematanda ematanda anokosha $ 8 kusvika $ 20 pamakumbo mana. Kupera mapurasitiki epurasitiki kunotenga chero kupi zvako kubva ku $ 1.50 kusvika ku $ 3.50 nechepamusoro petsoka asi hupamhi hwepamusoro hwevinyl dzematengo dzinodhura madhora $ 12 kusvika ku $ 24 pamakumbo mana.
Nzira yekuvaka sei fence yechenji?
Matanho ekugadzira feni yechena:
1. chengetedza kuronga, chinangwa uye sarudzo yako ye lattice fence. iyo nhanho yepamusoro kune yakawanda chero ipi zvayo inoshanda ndeyekuita chinangwa chezvaunoronga kuita, semugumisiro weizvi zvinotarisa zvinhu zvose zvinopesana zvaunofanirwa kufungidzira pamusoro pezviyero, kukwirira uye kuisa. vanzwisise chinangwa chetaiti yako yechipfini - zvingaita here kuti ufukidze nzvimbo yose yepfuma yako, inogona kushandiswa kuti ive yega, kana imwe chete inoda kungoshandisa iyo seyakashongedzwa kwekushongedza? Zvinonzwisisika, ganda rechetheni rinogona kushandiswa kuti rive runyararo ringada mapepanari akareba uye imwe nzira yakareba yeweave. Nokudaro, ukuru, chimiro uye chimiro chaunova nechinangwa chokuziva chinogona kutevera. Kana ukasarudza pazvinhu izvi, zvino ndiyo nguva yekuchikoro pasi rose rako lattice fence.
2. kurarama nyika. uchishandisa tepi yezviyero, urarame mumiririri weimba kupi zvako iwe unofunga kuisa yako lattice fence. zvakakosha kuti urarame zvakakwana semugumisiro weizvi zvinogona kuvimbisa kugadziriswa kwemukati mukati mekukura kwezvinhu kana iwe uchienda purojekiti. izvi zvinogona kuwedzera kukupa urongwa hwehuwandu hwakawanda hwezvigaro uye mapeji ekutengesa iwe uchave uchida.
3. tsvaga mutsara wokutanga wefence yako. Tora ikozvino nekutinhira danda panzvimbo yayo pasi, ipapo ugadzire zvakasara zvemuganhu wako uchishandisa tambo yemasoni. Kureba kweiyo lattice panels inoshandiswawo semutungamiri wekuparadzanisa kwezvigadzirwa. zviri kwauri iwe kana iwe ungada kuisa mukati memapaniti zvakananga kana zvisinganzwisisiki. asi zvisinei kuti zvakanyanya kutarisa kune izvi zvinowanzoita mamita masere pakati pemiti yose. Wedzera matanho kuti uone nzvimbo dzose dzepasiti. Ramba izvi kusvikira wapedza muganhu wose. chengetedza kuti iwe unongoramba uine chikwata chechikwata chakaenzana chakakosha munzvimbo yose.
4. Simhanya twine pamuganhu wako. Isa musimboti wekutanga (kutanga kwako mutsara kune fence) neine twine uye uende kumativi ose. Iva nechokwadi chokuti iyo twine iri kufamba yakarurama, kana iwe ukaona chero kusanzwisisika, iwe uchagadzirisa matanho acho zvichienderana naizvozvo.
5. Chengetedza bhuni rako. bvisa danda guru pamutsetse wako wokutanga, uye uchishandisa gomba rakaputika, gadzira gomba rine zvishoma ye3rd yemasita uye masendimita matanhatu. iwe uchakwanisa kuwedzera zvakare kushandisa peji ye lattice panels kuti utonge chikamu chemashure. Kana ukakwira pamwe nekuwedzera zvishongo post caps, iwe unofarira kugovera hutengo hwemasendimita gumi nemaviri eimba yakajeka kupfuura yakatenderera panji. chikamu chiduku che ⅓ chemicheto chinofanira kuenda pasi pezasi kuitira kuti uve nechokwadi chokuti nheyo ine simba. Chengetedza gomba rega roga roga pamuganhu wako. Dzokorora kusvikira uchisvika kumusoro.
6. Dururira ma inches emakwenzi akaoma kana kuti mabwe mumakomba. Zadzai zvakare pakanyora pasi zvakasimba.
7.Inde imwe chinyorwa pane imwe nzvimbo. kamwe majeka ari mu situ, fastidiously akaisa nzvimbo dzose mumakomba avo akasiyana-siyana.
8. Simhanya twine uye nzvimbo inonamatira pane imwe neimwe yezvigadziri zvamira kuti uone kuti ivo vakamira vakarurama. Shandisa yepamusoro kuti uedze kana yakananga. iva nechokwadi chokuti vakanyatsopera vasati vavagadzirisa munzvimbo yavo.
9. Shandisa yepamusoro-soro yepaneji yepasitori seyo mutungamiri wekuedza nhamba yepamusoro yezvigadzirwa. Cheka mapeji kana kuchinja kunoda asi zvakadaro sezvataurwa kare, kana zviyero zvichitorwa uye zvakatarwa mukugadzirira kwezvinhu, zvino izvi hazvizove nyaya. Uyewo, chengetedza kurongeka zvakare kana zvichidiwa.
10. kusanganisa simiti kubatanidza mukuchengetedza mapepa mazano. iwe uchaedza izvi zviduku zviduku kuitira kuti irege kuedza zvakare zvakare. iwe uchakwanisa kuwedzera kuwedzera mutarisiri wako we "âck œ setting" € iyo inongodururwa zvakananga kubva muchikwama, yakaoma uye isiri kusanganiswa, iyo yakanyorova nemvura. iyi yekrete inogona kudzivirira kukanganisa uye nguva nokuti inopedza kukosha kwekubatanidzwa uye inoderedza nguva yakasimba yekureba.
11. Wedzera yakaoma krete yakabatana nemakomba. Zadza zvizere uye zvinogone kuoma kwemakumi maviri nemana kusvika makumi mana masere masere. Sezvo ikozvino nokuti simenti yakaporeswa zvachose, bvisa twine uye naizvozvo matanda.
12. Prop lattices muzvikamu. Nyora pasi pasi pemisangano kupi zvako waungada kuputika lattice panels. Izvi zvinofanirwa kutenderera mberi kwezvimwe zvikamu zvinotarisana nechomukati chechikamu chejare rako. Matanda okutanga-drill pamusoro pezvikwangwani, uye gadzirai lattice panels kushandisa magetsi uye magetsi mashoma. Ramba uchiita nzira kusvikira wasvika kumusoro kwemuganhu. nyora kana zvose zvakananga nekushandiswa kwezinga.
13.Add kupedza kugunzva. Isa pende kana mhete nejasi rehuni tsvina. iwe unowedzera kubuda muchengeti wechipfini usina kumiswa kana iwe uchida kutarisa kwepanyama kwePVC. Bvisa ornamental post caps kana kuwedzera mukuchengeta nekutenda kwako.
Jovyea iyo nyanzvi yekuChinese inoshandiswa inoshandiswa / inofanirwa / inotengeseranaï¼ ‰ iyo inofunganya nekugadzira, kukura nekugadzirwa kwetambo yefenji profence.Our chain chain inozadza, yakanaka, yakanaka. Zvose zvemiti yedu inoteerera nehutano hwakanaka hwehutano hwemhando, zvigadzirwa zvedu zvave zviri vazhinji vevatengi pamwe chete vanobvumirana.